Turkey: Erdogan Oo Mar Kale La Wareegaya Hogaanka Xisbiga Talada Haya | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Turkey: Erdogan Oo Mar Kale La Wareegaya Hogaanka Xisbiga Talada Haya
Waxa la filayaa in madaxweynaha Turkiga, Raccep Tayyip Erdogan, maanta oo Axadda ah ku soo noqdo hogaaminta xisbiga Caddaaladda iyo Horumarinta ee talada dalka haya, xilkaas oo uu iska casilay sannadkii 2014-kii markii uu madaxtinimada dalka qabtay. Wax ka bedelkii u dambeeyay ee dastuurka ee aftida dadweynaha lagu ansixiyey ayaa madaxweynha u fasaxaya in uu xubin ka noqon karo xisbi siyaasadeed.
Waxa magaalo madaxda Ankar iyo baraha internet-ka ee bulshadu ku xidhiidho lagu arkayey sawirrada Erdogan oo ay ku ag qoran yihiin hal ku dhegyo ay ka mid yihiin “Maamulka birta ah iyo Turki xooggan.”
Shirkan aan caadiga ahayn ee xisbiga talada haya ayaa hal ku dheggiisu yahay “Marxalad cusub: Dimuqraadiyad iyo dib u habayn.” Taas oo tilmaan u ah isku shaandhaynta xukuumadda iyo isbedelka hogaanka xisbiga ee la filayo in lagu dhawaaqo todobaadada soo socda.
Warbaahin u xaglisa xukuumada ayaana hadal haysa ku soo noqoshada Erdogan ee hogaanka xisbiga, waxa aanay sheegeen in “ay taasi soo af-jari doonto khilaafkii ka taagnaa xisbiga dhexdiisa isla markaana ay kor u qaadi doonto hanka kaadiriyiinta iyo hogaamiyeyaasha xisbiga.”